Maalintii ugu horreeysay oo kontrool la’aan lagu maro Öresund - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Maalintii ugu horreeysay oo kontrool la’aan lagu maro Öresund
La cusbooneeyay torsdag 4 maj 2017 kl 11.55
La daabacay torsdag 4 maj 2017 kl 10.26
Dhanka Sweden oo kontroolka la adkeeynayo
Tareenka Kastrup oo korntroolkii laga qaaday. sawir: Johan Nilsson/TT
Maanta ayaa ah maalintii ugu horreeysay ee kontrool la’aan waraaqaha aqoonsiga la isaga goosho xuduudda u dhexeeysa waddammada Danmark iyo Sweden. Go’aanka dawladda ayaa hir-galay laga bilaabo saqdii dhexe ee xalay.
16 bilood ayaa ka soo wareegtay kolkii lagu soo rogey baarista waraaqaha aqoonsiga ee gaadiidka isaga goosha waddammada Danmark iyo Sweden, middaasina oo macaamiil badan iyo shirkaduhu dhaleecooyin ballaaran ka soo jeediyeen saacadaha safarradooda oo kor u kacay.
Samuel Larsson oo idaacadda uga soo warrama dalka Danmark oo saaka ku sugnaa xarunta tareemmada ee Kastrup ayaa ka war-bixiyay is-bedelka xaaladda.
– Is-bedelka ugu wayn wuxuu yahay in aan loo baahan tareenka in lagaga dego xarunta tareemada ee Kastrup, la soo ban-dhigo warqadda aqoonsiga oo mar labaad tareenka dib loogu laabto. Waxaa sidoo kale goobta ka maqnaa xeen-daabyadii laba mitir dhererkoodu ahaa iyo shaqaalihii wax kontroolayey ee xiraa direeyska jaalaha. Hase yeeshee tareemmada ayaan jadwalkoodii waxba laga bedelin iyadoona uu tareenku siddeed daqiiqadood uu xarunta ku sugnaado iyada oo aan wax kontrool ah aanu jirin, sida uu sheegay Samuel Larsson.
Qiyaastii 15 000 oo ruux ayaa isaga goosha buundada Öresund ee isku xirta waddammada Danmark iyo Sweden, iyadoona 8 000 – 9 000 oo ka mid ahi ku gooshaan tareenka. Iminka waxey dadyoowga tareenka ku gooshaa ka maarmeyaan iney tareenka ka degaan, laga kontroolo waraaqahooda aqoonsiga oo ey dib mar labaad ugu noqdaan isla tareenkii ey ka soo degeen. Hase yeeshee wakhtigii safarka ayaanu weli wax iska bedelin.
– Go’aankaa ayaa noqday mid neefta ka soo saarey macaamiisha tareemmada ku safarta. Macaamiisha ayaa aad uga gxumeeyda iyada oo dhanka akle aanay bilihii ugu dambeeyey dalka soo caga-dhigan qaxooti sidaa u fara badan, isla-markaana u arkay kontroolladaasi iney ahaayeen howlo aan loo baahneyn, sida uu sheegay Samuel Larsson.
- Rakaabka ayuu go’aankani u noqonayaa mid lagu raaxeeysto, hase yeeshee ay 7 daqiiqadood uu tareenku la taagnaanayo, sida uu sheegay Linus Eriksson, oo ka howl-gala shirkadda gaadiidka ee Skånetrafiken.
Cabdiqani Maxamed oo ku magac-dheer Fiyuujer, ana mid ah bulshada ku dhaqan magaalada Malmö wuxuu booqasho muddo aan dheereyn horteed ku tagay magaalada Kopenheegan ee caasimadda dalka Danmark muddadii ey socdeen howlihii kontroolladu. Mar uu middaa sawir naga siinayay auxuu yiri:
In la adkeeyo kontoolka dadyoowga Sweden soo geleya
Go’aanka dawladdu gaartay ee hir-galay xalay saqdii dhexe ayaannu macnihiisu ahayn in dhammaan la qaaday kontroolladii lagu sameeyn jirey dadyoowga isaga gooshaya waddammada Sweden iyo Danmark. Balse ay dawladdu amar ku siisay ciidanka ammaanka in la adkeeyo baarista dadyoowga safarka ku soo geleya Sweden ee ka yimaada dhanka dalka Danmark.